अर्को साल बिहे गर्छु; छुट्टी मिलाएर दुई महिना अघि नै आइज है बुनु” भनेका दाजुको कसरी म,लामी जान सकूँ ? (भिडियो) - Nawalpur Dainik
अर्को साल बिहे गर्छु; छुट्टी मिलाएर दुई महिना अघि नै आइज है बुनु” भनेका दाजुको कसरी म,लामी जान सकूँ ? (भिडियो)
मोरङ -साढे दुई वर अमेरिकामा थिइन्– दुर्गा बास्तोला (सदीक्षा)। पाइलटको तालिम लिन अमेरिका जानुअघि दुर्गा नेपालमै ‘एयर होस्टेस’ को काम गर्थिन्। पहिले सौर्य एरलाइन्सको ‘एयर होस्टेस’ भएर काम गरिन्। त्यसपछि श्री एयरलाइन्सको प्रमुख एयरहोस्टेस जिम्मेवारी निभाइन्। त्यसपछि उनलाई पाइलट बन्ने जोश जाग्यो। अनि अमेरिका हानिइन्– पाइलट तालिम गर्न। अमेरिकाको टक्सासस्थित ‘डेल्टा क्वालिफ्लाइट एभिएसन एकेडेमी’ मा तालिम चलिरहेको थियो।
उनलाई स्थानीयबासीले साथ दिएका छन् । उनलाई अहिले संसारभरिबाट साथ मिलेको छ । सबैले साहसी महिलाको संज्ञा दिन थालेका छन् । प्रवीण बास्तोला गत पुष ५ गते शंकास्पद अवस्थामा मृ’त भेटिएका थिए। उनी राती साथीहरुसँग बसेको कोठामा बिहान मृ’त फेला परेका थिए । अहिले आफ्नो दाजुको न्या’यको लागि ल’डी रहेकी उनै सदिक्षाको साथमा लाखौ नेपालीहरु उ’भिएका छन ।
Prevफागुन १२ गते बुधबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल